Macdanta Pyrope garnet waxay xubin ka tahay kooxda garnet - fiidyow
Iibso dukaankayaga 'pyrope garnet dabiiciga'
Pyrope macdanta wuxuu xubin ka yahay kooxda garnet-ka. Waa xubinta kaliya ee qoyska garnet-ka ah ee had iyo jeer ku soo bandhiga midab guduudan oo kujira muunadaha dabiiciga ah, waana dabeecaddaas in magaca ay ka hesho Giriigga dab iyo isha. In kasta oo ay ka yar tahay garnets-ka badan, haddana waa dhagax aad u ballaaran oo la adeegsado oo leh magacyo kale oo badan, oo qaarkood ay yihiin kuwo aan caadi ahayn. Chrome pyrope, iyo Bohemian garnet waa labo magac oo kale.
Pyrope saafi ah waa Mg3Al2 (SiO4) 3, in kasta oo caadiyan xubno kale ay ku jiraan ugu yaraan tiro yar - waxyaabahan kale waxaa ka mid ah Ca, Cr, Fe iyo Mn. Dhagaxu wuxuu sameeyaa qaab taxane ah oo adag oo leh almandine iyo Spessartine, kuwaas oo si wada jir ah loogu yaqaanno garnets pyralspite: pyrope, almandine iyo Spessartine. Beddelka bir iyo manganese ee magnesium ee qaab dhismeedka xiisaha leh. Natiijooyinka, garnets isku dhafan oo isku dhafan ayaa lagu qeexay iyaga sida ay yihiin pyrope-almandine saamiga. Dhagaxa-qaaliga ah rhodolite waa garnet ka mid ah 70% Halabuurka pyrope.
Asal ahaan pyrope-gu wuxuu ku yaalaa dhagxaanta maqaarka, gaar ahaan meelaha laga soo alxamo ee dhulka: walxahaas jilicsan ee loo yaqaan 'peridotites' ayaa loo aanayn karaa labadaba geeddi-socodka iyo qaab-dhismeedka metamorphic. Waxay sidoo kale ku dhacdaa dhagxaanta cadaadiska culus ee metalaha-culus, sida ku-taal Dora-Maira massif ee galbeedka Alps. Baaxaddaas dhexdeeda, ku dhawaad ​​pyrope saafi ah waxay ku dhacdaa kristolyo ku dhawaad ​​12 cm dhexroor ah; qaar ka mid ah pyrope-ku waxay leeyihiin dambas buluug ah, qaarna waxay leeyihiin kujiro enstatite iyo sapphirine.
Pyrope wuxuu caan ku yahay xarkaha loo yaqaan 'peridotite xenoliths' oo ka yimaada tuubbooyinka kimberlite, oo qaarkood ay ku jiraan dhaldhalaalka. Waxay ka heshay xiriirinta dheeman sida caadiga ah waxay leedahay 'CR2O3 content' 3 illaa 8%, taas oo siisa violet midabbo kala duwan leh midab guduudan oo qoto dheer, oo badanaa leh cirif cagaaran, iyo sababta oo ah tan ayaa badanaa loo isticmaalaa sida kimberlite tilmaamayaasha macdanta aagagga ay ka jiraan nabaad-guurka nabaad-guurka waxay ka dhigeysaa pin tilmaamaya asalka tuubbada adag. Noocyada noocan ah waxaa loo yaqaan 'chro-pyrope', ama G9 / G10 garnets.
Aqoonsiga Pyrope garnet
Tijaabada gacanta, pyrope aad ayey u adag tahay in laga sooco almandine, si kastaba ha noqotee, waxay u eg tahay inay soo bandhigayaan cillado yar yar iyo waxyaabaha ka soo baxa. Shuruudo kale oo wax lagu kala sooco ayaa lagu taxay jadwalka ku xiga. Waa in taxaddar la muujiyaa marka la isticmaalayo guryahaas sida inbadan oo ka mid ah kuwa liistada ah lagu go'aamiyay iskudheellitir ahaan koray, pyrope saafi ah. Kuwa kale, sida culeys gaar ah oo sarreeya, ayaa laga yaabaa inay wax yar u isticmaalaan markay wax baranayaan kristal yar-yar oo ku dhegan dhismooyinka macdanta kale ee silicate. Xaaladahaas, ururka macdanta ee lala yeesho macdanaha kale ee loo yaqaan 'mafic' iyo kuwa macdanta 'ultramafic' ayaa laga yaabaa inay yihiin tilmaanta ugu fiican ee qurxinta aad baraneyso inay tahay pyrope.
Qaybta khafiifka ah ee dabeecada, astaamaha ugu soosaaraha ee 'pyrope' waa kuwa lala wadaago ciridka kale ee caadiga ah: xasilinta sare iyo isotropy. Waxay u egtahay inay midabkeedu aad u yaryahay marka loo eego macdanta kale ee silicate ee qaybta khafiifka ah, inkasta oo Pyrope laga yaabo inuu muujiyo huruud casaan-guduud leh iftiinka diyaaradda. La'aanta xoqida, sida caadiga ah ee sheybaarka uxaasta ah, iyo ururada macdanta waa in sidoo kale loo istcimaalaa aqoonsiga Pyrope hoosta microscope-ka.
Pyrope garnet oo ka socda Pailin, Cambodia